ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးတင်သည့် သက်သေခံ သတင်းသုံးပုဒ်ကို တရားရုံး လက်မခံ - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးတင်သည့် သက်သေခံ သတင်းသုံးပုဒ်ကို တရားရုံး လက်မခံ
ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သက်သေခံသတင်းသုံးပုဒ်ကို ရုံးတော်မှလက်မခံကြောင်းသိရသည်။ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ စွဲချက်တင်ခံရသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို အကြိမ် (၃ဝ) မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး သတင်း ထောက်ကိုဝလုံးကို သက်သေအ ဖြစ် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ယင်းသတင်းသုံးပုဒ်မှာ ရခိုင် ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ရှေ့နေ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်ကပြောသည်။ ”သြဂုတ် ၂၅ ရက်ဖြစ်စဉ် အပြီးမှာ ဘင်္ဂါလီတွေကသတ်လို့ ၇၁ ယောက်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်း။ နောက် တစ်ခါ သြဂုတ် ၂၇ ရက်ထုတ်တဲ့ သတင်း။ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေ ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်း၊ နောက်ထပ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် ထုတ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်း။ အဲဒီသတင်းသုံးပုဒ်ကို သက်သေခံတာ။ တင်တာက သတင်းရေးတဲ့နေရာမှာ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘူး။ အခြားသူ တွေသေတာလည်း ထည့်ရေးတယ်ဆိုတာပြချင်လို့ ရုံးကိုတင်သွင်းတာ။ တင်တဲ့အခါမှာတော့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပရင့်ထုတ်ထားတာကိုပဲ တင် ဖြစ်တယ်။ သက်သေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရ တစ်ဖက်ကတိုက် ဆိုင်စစ်ဆေးထားတာမဟုတ်လို့ လက်မခံခဲ့တာပေါ့။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ပရင့်ထုတ်ထားတာကို သွင်းမယ်ဆိုရင် မူရင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ရမယ်” ဟု ၎င်းက မီဒီယာများကိုပြောသည်။
ယင်းအမှုရုံးချိန်းကို ဇူလိုင် ၁၇ ရက်သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုကာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးအား ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုချေဖြေရှင်းရန် တရားခံပြသက် သေများအဖြစ် ကိုဝလုံးက လေး ဦးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးက နှစ်ဦးတင်ထားကာ သက်သေများတွင် သတင်း ထောက်၊ စာရေးဆရာ၊ ယာဉ် မောင်း၊ မီဒီယာကျောင်းအုပ်ကြီး တစ်ဦးနှင့် တယ်လီနောတာဝန်ခံ တစ်ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက်များအက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(၁)(ဂ) ဖြင့် ရိုက်တာ သတင်းထာက်နှစ်ဦးကို ဇူလိုင် ၉ ရက်က စွဲချက်တင်ထားသည်။
သတင်းထောက်ကိုဝလုံးက ”သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒါ ကြောင့်မို့ မကြာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ အမှန်တရားတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ အပြည့်အဝယုံကြည်တယ် ”ဟု ရုံးအထွက်တွင် မီဒီယာများကိုပြောသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်း ထောက် ကိုသက်ဦးမောင် (ခ) ဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး(ခ)မိုးအောင်တို့နှစ်ဦးကို အရေးကြီးလုံခြုံရေး စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ညပိုင်းက ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာဒုံ ထောက်ကြန့် တိုးချဲ့ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မြေကွက်ရိုက် တရားမဝင် ရောင်းချမှု??
ဖားကန့်မြို့နယ် မြေစာပုံပြိုကျမှုကို ဆက်လက် ရှာဖွေနေ၊ အလောင်းတစ်လောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိပြီး သေ
”အရင်တုန်းကထက် ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းလာတော့ လိင်တူချစ်သူဆိုတာက ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးတော့ဖြစ?
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ရခိုင်လွှတ်တော်တို့ ကိုယ်စီ ကိုင်စွဲထားသည့် မာနမျိုးကို လျှော့ချ